Smart Home. Vahaolana an-trano Smart - aiza no hanombohana? Inona no atao hoe trano marani-tsaina? - SmartMe
Dom » Archive by sokajy "Smart Home"
Ny rafitra fitantanana vaovao ho an'ny fitaovana na koa ny trano iray manontolo dia nanova ny tsenan'ny elektronika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny fomba fisainana fa ny vahaolana an-trano an-trano dia tsy mety afa-tsy amin'ny trano lehibe ihany. Amin'izao fotoana izao dia tsy an'ny tompon'ny trano avo ihany no mampiasa azy ireo, fa na dia ny mpanofa trano kely aza. Ka raha mieritreritra ny hampihatra vahaolana toy izany ao an-trano ianao dia tonga amin'ny toerana mety. Eto ianao dia hahita toro-hevitra, torohevitra, hevitra azo antoka ary vaovao marobe avy amin'ny tontolon'ny Smart Home. Manasa anao izahay!
Inona no atao hoe trano marani-tsaina?
Raha mbola tsy henonao ny vahaolana vaovao manohana ny fitantanana ny trano fonenanao dia andao aloha hazavaina ny atao hoe trano manan-tsaina. Raha ny marina dia tsy misy famaritana mazava sy tsy miova. Ny Smart Home dia misy patanty sarotra sy sarotra amin'ny fifehezana ny tranobe iray manontolo amin'ny haavon'ny fampiharana, ary koa gadget tsotra sy tokana misy an'ny rehetra. Ka tsy mila manolo ny fitaovanao rehetra avy hatrany ianao ary manangona vola amin'ny fampiasa fanampiny. Afaka mampihatra tsikelikely vahaolana toy izany ianao. Aiza no hanombohana rehefa mamorona trano manan-tsaina? Ny tsara indrindra dia ny mifantina fitaovana ampiasainao isan'andro, toy ny mpandahateny vaovao, mpanadio vaksina, fanamainana na jiro.
Smart Home - aiza no hanombohana?
Mihamaro ny orinasa manapa-kevitra ny hanadio ny fitaovana misy azy ireo miaraka amin'ny fiasa mamela azy ireo ho fehezina amin'ny alàlan'ny rindranasa iray. Fahazoana mahavariana ho an'ny mpampiasa izany satria mahatonga ny hetsika maro hahomby kokoa. Vondron'olona vao manomboka amin'ity sehatra ity no manontany tena hoe: Smart Home - aiza no hanombohana ny fiainanao? Ireto manaraka ireto dia matetika no voafidy amin'ny dingana voalohany:
- robot fanadiovana - ity dia fitaovana malaza be hatrany noho ny fahafahan'ny fampiasana finday avo lenta mamela anao hivoaka ohatra mandritra ny fotoana tsy fisian'ny mpikambana ao an-trano,
- jiro - misaotra anao fa tsy mila mandehandeha eran'ny efitrano rehetra intsony ianao, mamelona sy mamono jiro, azonao atao izany na aiza na aiza mampiasa ny fampiharana; Izy io koa dia fiasa tena ilaina tokoa rehefa mandeha; Ny famonoana jiro amin'ny fotoana samihafa amin'ny antoandro dia miteraka fisehoana ao an-trano, ary amin'izany - mampihena ny mety hisian'ny vaky trano,
- mpandahateny manan-tsaina - safidy tsara io raha tsy fantatrao ny fomba sy ny toerana hanombohana ny famitana ny Smart Home ary raha izany no vahaolana mety aminao; Gadget tsy dia lafo loatra izy io, ilaina isaky ny trano. Ny fandefasana mozika amin'ny telefaona tsy mila mitady fitaovana, fanaraha-maso lavitra na famonoana solosaina finday dia endrika mety tsy isan'andro, fa mandritra ny fivoriana miaraka amin'ny namana na fianakaviana.
Smart home sy fitomboan'ny filaminana
Ny fitaovana Smart Home dia vondron'orinasa afaka manampy amin'ny fanatsarana ny filaminana ao an-tranonao ihany koa. Ny malaza indrindra amin'ity sokajy ity dia ny fakantsary. Manana rafitra manan-tsaina, misaotra amin'izay azonao hamarinina izay mitranga ao amin'ny trano na amin'ny trano na dia mandritra ny fialan-tsasatrao aza. Mihoatra ny indray mandeha, izy io dia vahaolana mahomby kokoa noho ny fanairana izay azon'ny mpamaky trano atao. Ny hidin-trano vaovao dia azo ampiharina ihany koa, tsy vitan'ny fampitomboana ny filaminana, fa mety ho ilaina koa amin'ny tsy fisian'ny lakilen'ny trano.
Ho fanampin'ny fakantsary, misy ihany koa ireo rafitra manampy amin'ny fiarovana amin'ny afo, tondra-drano na setroka. Mampihetsi-po ireo mpikatroka ao an-trano ny sensor vaovao rehefa misy zavatra manelingelina mitranga amin'ny alàlan'ny fampiharana. Ka raha manontany tena ianao hoe aiza no hanombohana rehefa mamorona trano marani-tsaina, ary mbola tsy manana vahaolana toy izany ao an-trano dia mety ity no dingana voalohany hataonao.
Smart Home - mpitari-dalana sy hevitra
Efa fantatrao ny atao hoe trano manan-tsaina. Raha ny marina, inona ny vokatra raisinao amin'ny voalohany, na manova ny atitany manontolo ho Smart avy hatrany ianao, na manomboka amin'ny hetsika kely, dia raharaha tian'ny tsirairay. Noho ireo rafitra manavao ireo, na izany aza, azonao atao ny mitaona ny fampiononana amin'ny fiainanao. Ka hanamorana ny safidinao, eto ambany ireto misy toro-hevitra azo ampiharina, tetika ary famerenana vokatra izay afaka manampy anao manomboka amin'ny vahaolana an-trano mahira-tsaina.